Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii kan hin beekamin ammoo heddu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii kan...
Balaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii kan hin beekamin ammoo heddu
Balaan tuulaa kosii (hubba) magaalaa Finfinnee naannoo Reephiitti uumame hanga ammaatti lubbuu namoota 65 olii galaafatchuun isaa beekame. Namoonni achibuuteen isaanii hin beekamni heddu. Kanniin madaayan wol’aansa argata jiru jedham.
Yeroo balaan kosii kuni gayutti namoota 150 olitu naannoo san ture jedhama. Namoonni heddu hanag ammaatti kosii jalatti awwalamutu shakkama. Carraan lubbuun bayuu dhiphataatiin kan dhufaa jiru. Balaa kanaan manniin jireenyaa 49 awwaalamaniiru ykn faaydaan ala ta’aniiru.
Lubbuun balaa kanaan baay’inaan galaafatamte kan dubartii fi ijoollee ta’uunis hubatameera. Nama haadha-mana fi ijoollee afur dhabetu jira, balaa kanaan. Tabajjuu Asras namni jedhamu haadhaa fi obboleewwan 3 dhabuu dubbata.
Matii fi firoottan namoota kosii jalatti awwalamee sochii lubbuu bararuu halkanii fi guyyaa godhaa jiru. Garuu, gama mootummaatiin gargraasa gayaa argataa akka hin jirre aarii fi gaddaan dubbatu. ‘Gargaarsa tokko mootummaa irraa hin arganne. Guyyaa harkaan halkan ammoo ifaa bilbilaan kan kosii qonnu,’ jechuun jiraatan tokko Reuters itti hime. Jiraataan biraa, ‘woggaa kudhanii oliif mootummatti iyyataa turrus namni nu dhagaye hin turre. Yakka kan nurratti rawwatame,’ jechuudaan mufii motummaa irraa qabu gabaastotaaf qoodate.
Maatiin reeffa firoottan isaanii fudhachuu fi awwaalachuu eegalaniiru.
Namoonni heddu naannoo sanitti mana gatiin rakasaa kireeffataniiti kan jiraataa turan. Ammatti hedduun manniin kanniinii kan argaman kosii jalatti awwaalamaniiti. Gama biraatiin ammoo, guyya guyyatti naannoo namoota 500’tu kosii kana keessa waan gatii qabaachuu malu soqataa kan oolan. Wolumaa galatti, balaa kanaan kan galaafatame lubuu fi jireenya namoota jiraachuudhaaf tattaafii cimaa godhaa turaniiti.
Reephitti magaalaan Finfinnee woggaa 50 oliif kosii kan gataa turte. Iddoo kanatti kosii gatuun woggoottan muraasa dura dhaabatee ture. Ta’us garuu, yeroo qotee-bultoonni Oromiyaa naannoo Sabbataa kosiin lafa isaanii irratti akka hin gatamne dhoorgan kan bulchiinsi magaalaa Finfinnee deebisee Reephitti kosii gatuuf dirqame. Tankaarfiin kuni balaa amma uumameef sababa ta’uu hin oolle jedhama.
Previous articleSa’aa dheeraadhaaf taa’uun dhibee gosa addaddaaf nama saaxila
Next articleErgamtoonni Woyyaanee naannoo Somaalee lafa Oromoo weeraraan fudhatu; saba Oromoos tuffatu